September 2021 – Candle Myanmar
အချစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး မိန်းကလေး ၄ မျိုးရှိတယ် (၁) ချစ်ကြောင်းမပြတတ်တဲ့ မိန်းကလေး သေလောက်အောင်ချစ်ပေမယ့် ရင်ထဲမှာပဲ သိမ်းထားတယ်။ ဘယ်တော့မှ ထုတ်ပြလေ့မရှိဘူး။ တီတီတာတာတွေ မပြောပဲ ဘယ်လောက်ချစ်တဲ့အကြောင်းတွေ ဘယ်လောက်လွမ်းတဲ့အကြောင်းတွေ တဖွဖွမပြောတတ်ဘူးပေါ့။ အရမ်းချစ်ပြလိုက်ရင် တန်ဖိုးမထားပဲနေမလားဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ သူ့တို့ရင်ထဲမှာ ရှိတဲ့အရာကို ထုတ်ပြပြီးမချစ်ခဲ့ကြရုံပဲ သေလောက်အောင်တော့
လူတွေက တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် ဘဝထဲကို ဝငလာကြတယ် တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် ပြန်ထွက်သွားပြီး တစ်ခုပြီးတစ်ခု အမှတ်တရတွေကိုချန်ထားခဲ့တယ် ။ အမှတ်တရတွေဆိုပေမယ့် သူတို့ထွက်သွားပြီး ပြန်တွေးတိုင်းမျက်ရည်ဝဲစေတဲ့ ဝမ်းနည်းမှုမှတ်တမ်းတွေလို့ပဲပြောချင်တယ် ။ ကံကုန်လို့ ပြန်ထွက်သွားကြေးဆို ဘာလို့ Memory တွေက ကံမကုန်တာလဲ ? တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အချိန်ကကုန်တာမြန်လာတယ်ထင်ရတယ် ၊ ငါကပဲအမြဲတစ်ယောက်တည်းဖြစ်နေလို့
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ချစ်ဖို့ နားမလည်သူ တစ်ယောက်ယောက်က မေးတယ်.. “တကယ်လို့ နင်ကြိုက်နေတဲ့လူက နင့်ကိုကြိုက်မနေရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ” တဲ့.. ဒီလိုအဖြစ်မျိုး ကိုယ်တစ်ခါမှ မကြုံဖူးပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကိုယ့်ကိုမကြိုက်တဲ့လူကို ကိုယ် မကြိုက်တတ်လို့ပါပဲ။ အငြင်းပယ်ခံရတာမျိုးကို ကိုယ် မလိုလားဘူးလေ။ သူ ကိုယ့်ကိုမကြိုက်ဘူး… ကိုယ်က ဘာလို့ သူ့ကိုကြိုက်ရဦးမှာလဲ။ ကိုယ့်ဒုက္ခကိုယ် ကိုယ်
လွမ်းဆွတ်ခြင်းတစ်မျိုးက ပျော်ရွှင်ခြင်းပါးပါးလေးတဲ့။ ပျော်ရွှင်ခြင်းတစ်မျိုးက အမြဲသတိရနေတာဖြစ်တယ်။ သတိရခြင်းတစ်မျိုးက အဝေးကနေအောင်းမေ့တာဖြစ်တယ်။ အိပ်မက်တိုင်း အကောင်အထည် ဖော်နိုင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ စကားတိုင်း အချိန်မီပြောခွင့်ရတာ မဟုတ်ဘ အချစ်တိုင်း ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် အဆုံးသတ်ကြတာမဟုတ်ဘူး။ အသံတစ်မျိုးက …. နောက်ထပ်နားထောင်ခွင့် မရှိနိုင်တော့ဘူး။ လူတစ်ယောက်က ….. နောက်ထပ်တစ်ဖန် အားကိုးမှီခိုခွင့် မရှိတော့ဘူး။ လက်တစ်စုံက….
ကိုယ်ချစ်ရတဲ့ မင်းကို သန်မာစေချင်တယ် ကလေး…
ကိုယ်ချစ်ရတဲ့ မင်းကို သန်မာစေချင်တယ် ကလေး… ကိုယ်ဟာ ဘယ်အချိန် ဘယ်လို သေသွားမယ်မှန်း မခန့်မှန်းနိုင်ဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ကိုယ်မရှိလည်း မင်းကို နေတတ်အောင် နေစေချင်မိတယ် ။ အားငယ်တတ်တဲ့စိတ်ကို ဖျောက်ပစ်လိုက်စေချင်တယ်။ တစ်ခုခုဆိုရင် မျက်ရည်ဝဲလာတတ်ပြီး တစ်ယောက်ထဲ သိမ်ငယ်နေတတ်တဲ့ အကျင့်ကို ပျောက်ကွယ်သွားစေချင်တယ်။ မင်းဟာ တစ်ယောက်ထဲလည်း
မင်းမှ မင်း ဖြစ်နေမယ့် လူကိုစောင့်ပါ
မင်းမှ မင်း ဖြစ်နေမယ့် လူကိုစောင့်ပါ အသေးအဖွဲလေးက အစ မင်းရဲ့ အတွေးအမြင်ကို လေးစားမယ့်လူကိုစောင့်ပါ။ မင်းပြောပြမဲ့ စကားတိုင်းအတွက် တန်ဖိုးထား နားထောင်မယ့်လူကိုစောင့်ပါ။ မင်းရဲ့ စိတ်ပူပန်မှုတွေ၊ သဝန်တိုမှုတွေကို မငြိုမငြင် နားလည်ပေးမယ့်လူကိုစောင့်ပါ။ မင်းအကြိုက်တွေကို သတိတရ မှတ်သားထားမယ့်လူကို စောင့်ပါ။ မင်းမျက်နှာကို
မင်း ထပ်ချစ်ရမှာကို ကြောက်နေတာမလား ငါ့ကို မညာပါနဲ့ …
“မင်းက အခု လူလွတ်တစ်ယောက်လား?” “အင်း ဟုတ်တယ်” “မင်းကို မင်းချစ်တဲ့တစ်စုံတစ်ယောက်က ပစ်ပယ်သွားတာကို ခံရဖူးလား?” “အင်း ပစ်ပယ်ခံရဖူးတယ်” “မင်း ဘာလို့ တစ်ယောက်တည်း နေနေတာလဲ တစ်စုံတစ်ယောက် ကို ရှာဖွေသင့်တယ် မဟုတ်လား” “တစ်ယောက်တည်း နေရတာ အဆင်ပြေနေတာပဲ ဘာလို့ ကျွန်တော့်အတွက်
ချစ်သူတွေဖြစ်နေပြီး ပြောစရာစကားမရှိလို့ စကားသိပ်မပြောဖြစ်ဘူးဆိုတာ အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးကွာသိလား
ချစ်သူတွေဖြစ်နေပြီး ပြောစရာစကားမရှိလို့ စကားသိပ်မပြောဖြစ်ဘူးဆိုတာ အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးကွာသိလား တကယ်တရင်းတနှီးနေတဲ့ အတွဲဆိုတာကလေ ပြောစရာစကားက တစ်နေကုန်တောင်ပြောရင်ကုန်မှာ မဟုတ်ဘူး တစ်နေကုန်ကြီး အချိန်ပေးပြီးစကားပြောရမယ်လို့ ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးကွာ ညဆိုည အားတဲ့အချိန်လေးတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အချိန်ပေးပြီး စကားလေးတွေပြောကြရင် ရင်းနှီးမှုပိုရမယ်ထင်တယ် သူလည်းသူလုပ်စရာရှိတာလုပ် ကိုယ်လည်းကိုယ်လုပ်စရာရှိတာလုပ် တစ်နေကုန်နေမှ အရမ်းချစ်တယ်လေး တစ်ခွန်းလောက်ပြောတာကကျတော့ အရမ်းအေးစက်လွန်းတယ် အေးစက်လွန်းရင် ဘာဖြစ်လဲ
ရှင်သန်ရတာ အနှစ် ၂၀ ဝန်းကျင်ပဲ ရှိသေးတဲ့ ဘဝတစ်ခုမှာတောင် ငါဟာ လူ့ဘဝကိုအတော်စိတ်ကုန်နေခဲ့ပါတယ်
ရှင်သန်ရတာ အနှစ် ၂၀ ဝန်းကျင်ပဲ ရှိသေးတဲ့ ဘဝတစ်ခုမှာတောင် ငါဟာ လူ့ဘဝကိုအတော်စိတ်ကုန်နေခဲ့ပါတယ်.. ဒါကြောင့်လည်း ဘယ်နေရာကိုမဆို ထွက်သွားဖို့အမြဲ အသင့်ဖြစ်နေခဲ့ပြီး ဘယ်အရာကိုမှ ထွေထူးပြီး ကြောက်မနေတတ်ခဲ့ဘူး။ သေရဲတာမှသတ္တိမဟုတ်ဘဲ နေရဲတာလည်းသတ္တိပဲလို့ အံကျိတ်ရင်းရှင်သန်နေထိုင်ခဲ့ရုံပါပဲ ခက်ခက်ခဲခဲပြန်ထူထလိုက် လောကဓံက ပြန်ရိုက်ချလိုက်နဲ့ ငါဟာ ဘယ်နေ့အဆုံးသတ်ရမလဲလို့ပဲ.